Nahitana Fitaovana Mampiahiahy Tao Amin’ny Biraon’ny Mpandini-dRaharaham-Pirenena Hongroà Iray Ka Nahatonga Ahiahy Fitsikilovan’ny Fanjakana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Jona 2016 8:31 GMT
Nanambara tao amin'ny lahatsoratra Facebook ny Ivontoerana Eötvös Károly (Ekint), vondrona liberaly mpandini-draharaham-pirenena iray sady fikambanana mpanara-maso ny zo sy ny olan'ny tsirairay ao Hongria, fa nahita fitaovana mampiahiahy izy ireo tao amin'ny biraony izay ninoany fa nitsikilo ny fifandraisany.
Niteny ny Ekint fa nilaza tamin'izy ireo ihany koa ilay manam-pahaizana tsy voalaza anarana fa sarotra ho an'ny olon-tsotra ny fahazoana ilay fitaovana. Kanefa nilaza tamin'ny fanambarana tao amin'ny tranonkalam-baovao 444 ny Minisitry ny Atitany fa mora vidiana eny amin'ny mpivarotra antsinjarany ilay fitaovana. Tsy niresaka izy ireo na tafiditra amin'ny fanaraha -mason'ny Ekint na tsia, nanampy anefa fa tsy mividy zavatra toy izany avy amin'ny tranonkala na mpivarotra antsinjarany ny fikambanana misahana ny sampandraharahan'ny fitsikilovana.
Nilaza tatỳ aoriana ny mpanolo-tsaina ara-piarovan'ny Praiminisitra Viktor Orbán, nandritra ny valan-dresaka nataony tamin'ny gazety fa tsy ny sampandraharahan'ny fitsikilovana no nametraka ilay fitaovana tao. Nilaza izy fa tsy tokony ho mora hita ilay izy raha izay no nitranga.
Nilaza tamin'ireo tranonkalam-baovao Hongroà Index ny talen'ny Ekint, Bernadette Somody, fa nanapa-kevitra izy ireo ny hanao savahao ny trano taorian'ny nilazan'i János Lazar, lehiben'ny biraon'ny Praiminisitra fa taterin'ireo mpitsikilo ho manodikodina ny politikan'ny fifindramonin'ny firenena amin'ny alalan'ny andiana fikambanana miasa ao ilay mpandraharaha Hongroà-Amerikana George Soros. Nahazo tsikera tao anatiny sy ivelan'ny firenena ny governemanta ao Hongria noho ny antso avo manohitra ny fifindra-monina tamin'ny krizin'ny mpitsoa-ponenana any Eoropa.
(Fanambaran'ny tonia: mandray fanohanana avy amin'ny Open Society Foundations [ihany koa] ny Global Voices. Nandray anjara amin'ny Atlatszo.hu izay tranonkalan-gazety mpanao fanadihadiana, izay efa nahazo famatsiam-bola avy amin'ny OSF ihany koa ny mpanoratra ity lahatsoratra ity.)
Na dia mbola tsy azo antoka aza izay ambadik'ilay fitaovana hita tao amin'ny biraon'ny Ekint ,dia ireo ONG no efa lasibatry ny manam-pahefana faramparany teo. Tamin'ny 2014, nisy fanentanana niampanga ireo ONG mpiaro zon'olombelona ho nahazo famatsiam-bola avy amin'ny Norway Grants – fiaraha-miasan'i Norvezy, Islandy ary Liechtenstein manana tetikasam-panohanana mikendry ny fampihenana ny elanelana ara-toekarena sy ara-tsosialy any Eoropa – ho mitsabaka ara-politika. Nisava ny biraon'ny ONG iray izay nizara ireo fanomezana ireo ny polisy.
Nanasongadina ny fanapahan-kevitra lehibe nataon'ny Fitsarana Eoropeanina Momba ny Zon'olombelona hirona any amin'ireo Hongroà roa izay mpiasa mpikambana ao amin'ny Ekint ihany koa ny fahitan'ny Ekint ilay fitaovana. Nitaraina izy ireo fa namela ny Foibe Miady amin'ny Fampihorohoroana ao Hongria hanao asa fitsikilovana tsy nisy fankatoavana na fiantohana avy any ivelan'[ny hotsikilovina] ny lalàna nampidirina tamin'ny taona 2010.
Nanambara ny fitsarana tamin'ny Janoary fa nandika ny andininy faha-8 ao amin'ny Fifanarahana Eoropeanina Momba ny Zon'olombelona ny rafitra ara-pitsaran'i Hongria, ​​izay mivaky toy izao :
Nanaovana fitarainana tamin'ny 2014 ilay raharaha antsoina hoe Szabó sy Vissy mifanandrina amin'i Hongria. Ankehitriny, tale ao amin'ny Sendikan'ny Fahalalahan'Olompirenena Hongroà i Máté Szabó. Nanao fanehoan-kevitra tao amin'ny Facebook izy andro vitsy lasa izay manao hoe resy tamin'ny fampakarana ny raharaha manohitra ny didim-pitsarana ny governemanta hongroà . Midika izany fa mila manova ny fitsipika mba hanome fiarovana tsara ho an'ny olom-pirenena ny governemanta Hongroà.